Fumana iWebhusayithi yakho eNtsha ikhase kuGoogle
Uyifumana njani iWebhusayithi eNtsha eCrawled yiGoogle Ngomso
NgoLwesibini, Juni 28, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 UNick Carter
Kutshanje, bendisungula iiwebhusayithi ezininzi ezintsha. Njengoko i-IdilesiTwo ikhulile kwaye ixesha lam likhululekile, lenziwe sisiphango esifanelekileyo semibono emitsha kunye nexesha lasimahla lokuphumeza, ndiye ndathenga inqwaba yemimandla ndasebenzisa iindawo ezincinci ezisekhohlo nasekunene. Ewe ndiphelelwe ngumonde, nam. Ndinombono ngoMvulo, ndiyakhe ngoLwesibini, kwaye ndifuna ukugcwala ngoLwesithathu. Kodwa kunokuthatha iintsuku okanye iiveki ngaphambi kokuba idomain yam entsha ibonakale kukhangelo lukaGoogle, nokuba ndikhangela igama lam lesizinda.
Ke ndiye ndaqala ukucofa ifomula yokufumana izigcawu ukuba zize ngokukhawuleza. Ukuba i-SEO yi-alechemy, ke le yasekhaya-yeyokukhawulezisa ixesha ukusuka kulwaziso ukuya kwisalathiso. Ilula, kodwa iyasebenza. Olunye lolingo lwam lwamva nje lurhubuluzile kwaye luvele kwiziphumo zokukhangela ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ndilandela nje la manyathelo alula asi-8.
Cwangcisa i-SEO yakho kwiphepha lokuqala, ubuncinci ubuncinci. Kuyavunywa, oku akunanto yakwenza nokukhasa, kodwa ukuba awuyenzi le nto kuqala, amanyathelo alandelayo asi-7 alilize. Ngokukodwa, qiniseka ukuba iithegi zakho zetayitile zilungiselelwe. Kutheni kubaluleke kangaka nje oku? Kuba, nangona singasifumana isigcawu kwiphepha lakho ngokukhawuleza, oko akuthethi ukuba bazokubuya ngokukhawuleza. Ke, ukuba ukumiliselwa kwakho okokuqala kukho iithegi zetayitile ebhalwe gwenxa, emva koko unokuncanyathiselwa kwiiveki ezimbalwa ezizayo ngomxholo ogcinwe kancinane kwisalathiso sikaGoogle. Qiniseka ukuba into ongxamele ukuba ibonwe ikufanele ukubonwa njengoko injalo kwiiveki ezimbalwa ngelixa ulinde ukukhasa okulandelayo.
Faka uGoogle Analytics. Yenza oku ngaphambi kwemephu yesizathu esinye esilula: igcina ixesha. Enye yeendlela onokuqinisekisa ngayo iwebhusayithi yakho entsha nge-Google Webmaster nge kubahlalutyi Iskripthi. Ke, gcina inyathelo kwaye wenze oku kuqala. Ukwenza oku, ndwendwela www.google.com/analytics.
Ngenisa imephu yendawo yeXML kwizixhobo zeGoogle Webmaster. Ungafaka nayiphi na enye yeeplagi zeWordPress ukwenza le sitemap ngokuzenzekelayo, okanye wenze enye ngesandla. Oku kubalulekile ekufumaneni ukukhasa ngokuchanekileyo nangokupheleleyo, nangona kunjalo uninzi lwee-novice webmasters zikholelwa ukuba sisiphelo-sokurhubuluza. Ayiyo. Ukuba uyema kweli nqanaba, njengoko i-99% ye-webmasters entsha isenza, uya kulinda iiveki okanye iinyanga ngaphambi kokuba uGoogle ajikeleze ukukhasa indawo yakho. Oku kulandelayo kuyakukhawulezisa le nkqubo. Ukugqiba eli nyathelo, ndwendwela www.google.com/webmasters
Yongeza i-URL kwiProfayile yakho ye-LinkedIn. Xa uhlela iprofayile yakho ye-LinkedIn, unako ukubandakanya ukuya kuthi ga kwii-URL zewebhusayithi ezi-3. Ukuba sele uzisebenzisile zontathu ezo ndawo zokubeka, lixesha lokuba uzincame okwethutyana. Khetha enye ye-URL oza kuyisusa kwezi veki zimbalwa zilandelayo kwaye uyibuyisele nge-URL kwiwebhusayithi yakho esanda kupapashwa. Sukuba nexhala, ungalitshintsha eli kamva. Beka inqaku kwikhalenda yakho AKUKHO MVA nje kweentsuku ezili-14 kamva ukuze ubuyele kwiprofayile yakho ye-LinkedIn kwaye ubuyisele uluhlu lwakho lwe-URL kwinto owawunayo ngaphambili. Kwisithuba sezo ntsuku zili-14, uGoogle uya kuthi mhlawumbi alifumene ikhonkco elitsha kwaye alandelwe kwiwebhusayithi yakho.
Yongeza i-URL kwiProfayile kaGoogle. UGoogle ulula ngakumbi ngenani lamakhonkco awavumelayo kwiprofayile yakho. Xa usayinelwe ukungena kuGoogle, nakweliphi na iphepha likaGoogle (kubandakanya iphepha labo lasekhaya) unganqakraza kuJonga iProfayile kwikona ephezulu ngasekunene, emva koko ucofe uHlela iProfayili. Ngasekunene, kuya kufuneka ufumane icandelo elibizwa ngokuba yi "Links". Apho, unokongeza ikhonkco elililo. Apha, unokusetha isicatshulwa se-anchor kwigama lakho elingundoqo njengoko ukongeza i-URL yakho entsha kwiprofayile kaGoogle.
Chaza iwebhusayithi yakho kwiWikipedia. Kulungile, ndigaxekile kwiWikipedia. Ungathumela intiyo-imeyile ku-yick@i-dont-care.com. Injongo yakho apha kukukhankanya umthombo kwiwebhusayithi yakho (inqaku lebhlog okanye elinye iphepha lolwazi) kwinqaku elifanelekileyo kwiWikipedia. Kukho ubugcisa kule nto. Nalu injongo: ukuba ucaphulo lwakho luphile ubuncinci iiyure ezingama-72 ngaphambi kokuba umntu alususe kwiWikipedia. Ukufezekisa oku, jonga inqaku elingaziwayo. Ukuba inqaku lifumana ukuhlela okuninzi ngemini, kusenokwenzeka ukuba ukongeza kwakho kucime ngokukhawuleza ngaphambi kokuba i-bots kaGoogle ibe nethuba lokuyifumana. Kodwa, ukuba ufumana inqaku elifumana ukuhlela malunga nenyanga enye, lelo litikiti lakho legolide. Yongeza isivakalisi esikrelekrele nesifanelekileyo (ewe, kwanokufunda kunye nokuyinyani) isivakalisi esitsha kwaye ufake i CITE_WEB Isalathiso ekugqibeleni. Sukuba nesibindi ngokudibanisa icandelo okanye umhlathi omtsha ngokupheleleyo. Injongo yakho kukubonwa zi-bots, kodwa UNGAYI kuqatshelwa ngabantu.
Papasha inqaku likaGoogle Knol. Nje ukuba uGoogle aqonde ukuba iWikipedia iyathandwa, bazama ukukhuphisana nayo. Google Knol (www.google.com/knol) iphantsi kakhulu kwezemfundo kwaye akukho nkqubo ye-vigilante yokususa amanqaku anomdla kuye. Uqinisekisiwe ukuba i-Knol yakho iya kuphila ngonaphakade. Oku kuthetha: kungcono ulunge. Sukushicilela into eza kusinda kwaye ibonakalise kakubi igama lakho kunye nophawu lobomi. Bhala inqaku elifutshane, elifanelekileyo njengokungena kwebhlog kwaye uyiqhagamshele kwi-URL yakho esandula kupapashwa. Njengayo nayiphi na into, kubandakanya amagama aphambili kwisihloko sale Knol nakwitekisi yakho ye-anchor kuyacetyiswa nayo.
Papasha ividiyo yeYouTube. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, ndapapasha inqaku elichaza indlela yokufumana Qhagamshela incindi evela kuYouTube. Ngaphandle kokuphinda umxholo apha, ndiza kukuxelela ukuba ulandele imiyalelo Apha kwaye inyathelo lakho le-8 liya kugqitywa.
Itotali iyonke, xa ndisungula iwebhusayithi entsha ndinemizuzu engama-30 yokusebenza ngaphambi kokuba ndigqibe. Ukuba ndenza onke la manyathelo asibhozo, ndinokuqiniseka ukuba indawo yam izakuvela kukhangelo lukaGoogle kwimiba yeentsuku, ukuba ayizizo iiyure. Njani? Kungenxa yokuba ndinike uGoogle lonke ithuba lokufumana i-URL entsha. Ukuba ufumene ezinye iindlela ozisebenzisayo usebenzisa i "alchemy" yakho nceda ukhululeke ukwabelana ngezimvo zingezantsi.
tags: Iziphumo zeshishiniikhuphoni zokusebenzaamatikiti eselulasarah abaphangimarbles
Yintoni eyenza ukuba abantu bafune ukulandela uphawu lwentengiso?
Juni 28, 2011 ngo-6: 23 PM
Ndiyathanda ukuvuyisana nawe ngokwenza umsebenzi omnandi wenick.
Juni 28, 2011 ngo-6: 28 PM
Ukubhala okukhulu, uNick. Ndikwinkqubo yokugcwalisa ukugcwalisa iwebhusayithi yam ngamanqaku ebhulethi, amagama aphambili, kunye nezinye izinto ezinxulumene neshishini lethu. Ayisiyiyo le nto ndifuna ukuba yonke into ibonakale ekugqibeleni, kodwa sisiqalo, kwaye inefuthe. Ndicinga ukuba nguwe owandibuza kanye, "yintoni ekubambezelayo ukuqala?" Ndiphendule ndathi, "akhonto, ndizakuqala kwiveki ezayo." Uphendule wathi, "Hayi." Yintoni ekuthintelayo ukuba ungaqali, NAMHLANJE? ”
Juni 29, 2011 ngo-1: 26 AM
Ingathi yinto endinokuyithetha 😉
Ngaba usabambelele ekuthumeleni ukukhasa de ikopi yakho yewebhusayithi yongezwe ngokufanelekileyo ngegama elingundoqo… er… Ndithetha ukuba “ulungiselelwe”?
Juni 29, 2011 ngo-12: 51 AM
Inqaku elilungileyo lizaliswe yimizekelo eqinileyo, kodwa kushiyeke izinto ezimbini ezimangalisayo; Amaphepha e-Twitter nawe-Facebook. Kuba uGoogle uhlawulela ukufikelela kumsinga we-Twitter, iakhawunti enegunya elifanelekileyo ekwabelana ngekhonkco kwaye mhlawumbi abantu abambalwa abayiphindayo kwakhona ngomlinganiso olungileyo baya kwenza uGoogle ukuba aphande. Nokuba akukho kulandelwe. Ukuba ufuna ukuqinisekisa ukuba akukho ndlela ilandelayo ayinakuba nefuthe, yondle nge-RSS kwiakhawunti ekhululekileyo.
Kwangokunjalo iphepha likaFacebook, hayi iprofayile, liya kukrozwa ngokukhawuleza ngokunjalo. Ukulinganisa okuhle i-tweet ikhonkco kwiphepha le-Facebook, kunye ne-Facebook thumela ikhonkco kwimeko ye-Twitter. Isizathu sokuba ndicebise oku kungenxa yokuba abantu abaninzi sele benenye okanye zombini ukuseta.
Oku akuphikisani nezinto ozenzayo kunjalo, zimbalwa ngakumbi ezisebenze kakuhle kakhulu kum. Nokuba yeyiphi na indlela, ukubeka amakhonkco apho uGoogle ahlala erhubuluza ngelixa izinga lokukhasa kunye nohlahlo-lwabiwo mali lokuhla lusezantsi kwisizinda esitsha okanye indawo ehlaziyiweyo iya kukhawulezisa isalathiso kwaye ngumbono olungileyo.
Juni 29, 2011 ngo-1: 24 AM
Kevin, unyanisile. Abo babini kufuneka babekhona. Yiyo loo nto bengakhange benze iresiphi yam "alchemy":
-Nge-twitter, umbono wonke kukuba kufuneka ube neakhawunti eklabhu ephezulu ukuze uyi-tweet kuyo. Ukuba uye wenza iakhawunti entsha ye-twitter, ndiqinisekile ukuba ayinaxabiso lingako ekufezekiseni umdla wabakhasi.
Nge-Facebook, ingxaki kukuba iphepha lithatha ixesha elide ukwenza kakuhle, kwaye ukwenza kakubi kunokuba yingozi kunokulungileyo.
Ukuba unayo imithombo yobutyebi, olunye uluvo oluhle endihlala ndilwenza kodwa andinakukuyalela wonke umntu ukuba abeke ikhonkco kwiwebhusayithi yakho entsha kwisizinda esinegunya eliphezulu osele ungumnini. Ewe abantu abaninzi abanayo enye, ke kwakhona, ndiyishiyile loo nto kwi-alchemy.
Enkosi ngokongeza ezi.
Juni 29, 2011 ngo-2: 56 AM
Enkosi Nick ngezi ngcamango zimnandi… ndiza kuzidlulisela kubathengi bam. Ngaba uyakhathazeka xa ndiyiphinda ibhlog yam ngekhredithi epheleleyo kuwe?
Juni 29, 2011 ngo-1: 08 PM
Andinangxaki. Unokufuna ukucacisa okanye ukuphinda ubeke amagama kuwo ukuze ungafumani mxholo wokuphinda umxholo.
Juni 29, 2011 ngo-5: 37 AM
Iingcamango ezintle uNick. Le fomyula eqinileyo. Khange ndicinge ngeWikipedia okanye iKnol, kodwa ikakhulu kungenxa yohlengahlengiso oluqhubekayo. Kuya kufuneka ndikhumbule ukuba kwixa elizayo.
Juni 29, 2011 ngo-1: 25 PM
Umbono we-YouTube ungcono kune-wikepedia ……… ..
Juni 29, 2011 ngo-1: 35 PM
Andiyi kwenza enye ngaphandle komnye. UGoogle akalindelekanga, kwaye iWikipedia iyarhubuluza rhoqo.
UGabriel Gonçalves Nunes Mazett
Novemba 24, 2011 ngo-3: 32 PM
Ndibeka nje ikhonkco kwiBhlog yam, kwaye ngaphantsi komhla ndiyifumana. Elula.
Jan 3, 2012 kwi-9: 18 AM
iingcebiso ezilungileyo enkosi